Xasan Sheekh Maxamuud - Gpedia, Your Encyclopedia
Xasan Sheekh Maxamuud oo fadhiya shirkii London, May 2013
Madaxweynihii 8aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya
20 Sebteembar 2012 – 8 Febraayo 2017
Cabdi Faarax Shirdoon
Shariif Sheekh Axmed (Ku meel Gaar)
Maxamed Cabdulaahi Maxamed
Gudoomiyaha Xisbiga Nabadda iyo Horumarka
la wareegay Xilka
20 Abriil 2011
Asiga ayaa aas aasay
(1955-11-29) 29 Nofeembar 1955 ( 64jir)
Xisbiga Nabadda iyo Horumarka (2011–gudoomiye)
Qamar Cali (1981-Qaba)
Sahro Cumar Xasan (1990-qaba)
Villa Somalia (Si Rasmi ah)
Muqdisho, Kaaraan iyo Wadajir (Si gaar ah)
Hoose dhexe - Jalalaqsi
Jaamacada Ummada Soomaaliyeed Muqdisho & (Bhopal, Madhya Pradesh Indiya)
Maamulka iyo Maaraynta
Xasan Sheekh Maxamuud (Af carabi: حسن شيخ محمود‎; Af Ingiriis : Hassan Sheikh Mohamud
3 Lixda Tiir ee barnaamijkiisa siyaasadeed
4 Hiigsiga Cusub "new deal"
Taariikh Nololeedka eng Ahmed Mohamed Farah. Ahmed Mohamed Farah cargaale waxa uu kudhashay Tuulo hoos timaado degmada guriceel ee gobolka galgaduud sanadkii 1995. Wxuu dugsiga quraanka iyo dusiga hoose kuqaatay degmada guriceel. Dugsiga sare wuxuu uga baxay Al-ma'muun Al-azhari school muqdisho 2015-2016. Wuxuu kubiiray jamhuriya university of science and technology muqdisho Asigooo kabaranaya civil engineering.
64 / 275
Xasan Shiikh Maxamuud oo heystay 60 Cod
Waxa uu kaga guuleeystay wareeggii ugu dambeeyay Shariif Shiikh Axmed.
Xasan Shiikh Maxamuudwaxa oo helay 190, halka
Shariif Shiikh Axmed oo helay 70.
70 / 275
Lixda Tiir ee barnaamijkiisa siyaasadeed
1- Xasilita dalka
Sarraynta sharciga & Dawlad wanaag
2- Soo noolaynta dhaqaalaha dalka
3- Nabadaynta & dib u heshiisiinta
4- Soo noolaynta adeegyada Bulshada
Fayo dhowrka guud ee bulshada
5- Midnimada & Wadajirka ummadda Soomaaliyeed
6- Ilaalinta & abuurista xiriirrada caalamiga ah ee ku salaysan iskaashi & wadajir.
Hiigsiga Cusub "new deal"
Ujeedada barnaamijka Hiigsiga Cusub waxa weeye in la helo talo midaysan oo lagu dhisayo dalka. Hiigsiga Cusub waxaa horey u adeegsaday dalal badan, innaguna taasi baan daba taaganahay waxaan rajaynayaa in aan dhibaatadda kaga baxno ” sidaasi ayuu yiri Wasiir Abuukar.
Barnaamijka Higsiga Cusub oo ah aragti qaran oo midaysan, ayaa xoogga saaraya dhinacyada ay ka mid yihiin siyaasadda, nabadgelyada, caddaaladda, dhaqaalaha, ururinta canshuuraha iyo adeegga bulshada.
Xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah oo ka hadlay furitaanka shirkan wada-tashiga ah ayaa soo dhoweeyey barnaamijka Higsiga Cusub, waxaana ay tilmaameen in barnaamijkan uu wax badan ka tarayo marxaladda uu marayo dalka Soomaaliya.
Barnaamijka Hiigsiga Cusub ayaa ah in dalalka nugul ee dagaalada ka soo baxaya la siiyo dhaqaale toos ah, waxaana Dawladda Soomaaliya yeelanaysaa soo jeedinta qorshaha lagu taageerayo iyo fulintiisa. Higsiga cusub ayaa markii ugu horaysay lagu go’aamiyey shir lagu qabtay magaalada Busan ee dalka Koonfur Kuuriya dhamaadkii 2011-kii, waxaana ujeedadu ahayd in kor loo qaado waxtarka kaalmada la siiyo dalalka nugul.
Ra'iisul wasaarayaashii Soomaaliya
Dhulka Ilaalada Somaliland
Wakhtigii Mucaaradka (1986–1992)
Jasiiradaha Jubbada Hoose
Xidhiidhka Arimaha Dibada
Maamul Goboleedyada Soomaaliya
Muusiga iyo Fanka
Sheekh Shariif Axmed
TFG Xasan Sheekh Maxamuud
2012–2017 Dawladdii Qabyada Xilka kala wareegay
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xasan_Sheekh_Maxamuud&oldid=191811"